Looking for Condominium - 3,500 Lakh
Posted by Myint Myat Myat
Hill Topကွန်ဒိုဝယ်သူရှိပါတယ် Sqft.1800လိုချင်ပါတယ် 3500သုးံမယ်Dataရှိသူမြန်မြန်လေးနော် 09423719283
Myint Myat Myat
Posted by Ko Zaw
ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် A block, B block , 1လမ်းမှ 10 လမ်းအတွင်း မြေညီထပ် အမြန်ဌားလိုပါသည် ဘိလိယက်ခုံဖွင့်မည်ဖြစ်၍ ရေရှည် ဌားရမ်းလိုပါသည် အရှေ့ဆောင် ပါသည့်အခန်းမဌားလိုပါ ဆက်သွယ်ရန် ကိုဇော် (အကျိုးဆောင်) 09444898916
ယုဇန ဥယျာဉ်မြို့တော် ၊ အေဘလောက် ၊ ဘီဘလောက် အတွင်းရှိ ၃လွှာ ၄လွှာ ငါးလွှာ တိုက်ခန်းများ ဝယ်ယူလိုပါသည်။ တိုက်ခန်းရောင်းချင်သူများ 09444898916 သို့ ဆက်သွယ်ပေးပါရန်။
ဒဂုံ​တောင်​ ဒဂုံဆိပ်​ကမ်းမြို့နယ်​ရှိ 145.146.151.152.153. 150.149.105.80.85.70. 77.60.66.68.79.90 71.72 154.144.91.63.62ရပ်​ကွက်​များရှိ ​မြေကွက်​များဝယ်​လိုသည်​ ​မြေကွက်​များကို အမှန်​တကယ်​​ရောင်းချင်​မှဆက်​သွယ်​ပါ ဆက်​သွယ်​ရန်​ဖုန်း09974814632 Cbမှာ ရပ်​ကွက်​​ မြေကွက်​အမှတ်​ ​ဈေးနှုန်း ပို့ထားရင်​လဲအဆင်​​ပြေပါတယ်​
Looking for Landed House - 10 Lakh
Posted by Aung Thiha
ရုံးခန်းဖွင့်ရန် သာကေတ မြခွာညိုအိမ်ယာ ဝင်းအတွင်း လုံးချင်းငှါးလိုပါသည် ( 10 သိန်း) သုံးပါမည်
Looking for Apartment - 10 Lakh
အလုံ ကြည့်မြင်တိုင် ရုံးခန်းဖွင့်ရန် မြေညီ သို့ လုံးချင်း ကားပါကင်အဆင်ပြေရပါမည် ( 10 ) သိန်းသုံးပါမည်
စမ်းချောင်း ရန်ကင်း ဗဟန်း ပရိဘောဂအစုံပါ တိုက်ခန်း ( $500 ) အထိသုံးပါမည် အိပ်ခန်း တစ်ခန်းပါ အဆင်ပြေသည်
ယုဇန တာဝါအနား ပရိဘောဂအစုံပါ တိုက်ခန်း. ( $450 ) သုံးပါမည်
သာကေတ မြခွာညို အိမ်ယာ ရုံးခန်းဖွင့်ရန်အတွက်သာ ( 10 ) သိန်းသူံးပါမည်
Looking for Landed House - 35 Lakh
လိူင်သာယာ FMI အိမ်ယာ လုံးချင်းငှါးလိုပါသည် အိမ် သန့်ပါက ဈေးသုံးနိုင်ပါသည် ( 35 သိန်း အထိသုံးပါမည်)
လမ်း80တင် အငှါးလိုချင်ပါတယ်။ဆိုင်ခန်းအကျယ်မျက်နှာစာ 15'ပေရှိရပါမည်။ 30-35လမ်းကြားဖြစ်ရမည်။တစ်လ10-15သိန်းအတွင်း 09452830798
အမြန် ဝယ်လိုသည်! စက်မှုဇုံမြေ ၁ဧက/၂ဧက ဒဂုံ(တောင်/အရှေ့/ဆိပ်ကမ်း) ဆက်သွယ်ရန် ၄၃၀၃၈၉၉၉ ၄၂၁၁၈၁၃၁၅ ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းဖြင့်သာ ဆက်သွယ်ပေးကြပါခင်ဗျာ!
Looking for Landed House - Any Price
အမြန် ဝယ်လိုသည်! တောင်ဒဂုံ(မောင်းမကန်မေးတင်) ၄၀×၆၀ပေ ဆက်သွယ်ရန် ၄၃၀၃၈၉၉၉ ၄၂၁၁၈၁၃၁၅ ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းဖြင့်သာဆက်သွယ်ပေးကြပါခင်ဗျာ!
Posted by Yada Nar
မင်္ဂလာပါ အဝယ်ဧည့်သည်လေးရှိလို့ခင်ဗျ အင်းစိန်ဈေးရှေ့/ထောင်ရှေ့ မိန်းလမ်းမကြီးပေါ် ပေအကျယ် အနည်းဆုံး ၂၀ ×၆၀ရှိရမည်။ ဈေးနှုန်းပေါက်ဈေးသုံးမည်။ (တိုက်ခန်းမြေညီများ မရပါခင်ဗျ) အကျိုးတူလုပ်သော /အကျိုးဆောင်များနှင့် အိမ်ရှင်များဆက်သွယ်အပ်နှံပေးပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်..................... ၀၉၂၅၄၃၁၉၀၉၇ ၀၉၉၆၅၀၅၆၅၅၈....
Posted by Tha Ra Phu
ဝယ်လိုသည် ----------- ရန်ကုန်မြို့ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းရှိ ပြည်ထောင်စုလမ်း ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်း ဘုရင့်နောင်လမ်း မင်းရဲကျော်စွာလမ်း ရာဇဓိရာဇ်လမ်း ပေါ်ရှိ မြေကွက်သီးသန့် ဝယ်လိုသည်။ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - 09 699 855 112, 09 699 855 113, 09 699 855 114 Viber - 0943057708, 09780985600
Posted by House Estate Agent
ရန်ကုန် ပေ ၁၀၀ ပတ်လည် လမ်းမတန်း အခန်းပေးအခန်းယူ ဆောက်လိုသော မြေပိုင်ရှင်များ အရောင်းလည်းရှိပါက အမြန်ဆက်သွယ်ပေးပါခင်ဗျ 09954477454
House Estate Agent
Posted by Mya Cho Kyi
''မိတ်‌‌ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ'' ဒဂုံဆိပ်‌ကမ်းမြို့နယ်‌မှ အိမ်‌ခြံ‌မြေ များကို‌ရောင်းလို ဝယ်‌လိုပါက မြချိုကြည်‌ အိမ်‌ခြံ‌မြေ ‌ရောင်းဝယ်‌‌ရေးတွင်‌‌ လက်‌ရှိ‌ပေါက်‌‌ဈေးအတိုင်း ‌‌ဈေးနှုန်းမှန်‌ကန်‌စွာဖြင့်‌ ဝယ်‌ယူ‌ရောင်းချနိုင်‌ ရန်‌‌ဆက်‌သွယ်‌စုံစမ်းနိုင်‌ပါသည်‌၊၊ ဆက်‌သွယ်‌လိုပါက Ph - 0943191083, 09764319108
Mya Cho Kyi
Posted by Yangon City friend real estate service co.,ltd
မင်္ဂလာ​တောင်​ညွှန့်​ ဗိုလ်​​အောင်​မြတ်​လမ်းနဲ့ ကန်​ရိပ်​သာလမ်းထောင့်​ရှိ Kan Thar Yar Center အနီး လုံးချင်းတိုက်​ငှါးလိုပါသည်​။ အဓိကလိုအပ်​ချက်​မှာ - >> လူ ၁၀ ဦးခန့်​​နေရန် ဖြစ်​သဖြင့်​ အနည်းဆုံး အိပ်​ခန်း (၁၀) ခန်းခန့်​ ပါရှိရပါမည်​။ >> ကားပါကင်​ ၂ - ၃ စီးခန့်​ရှိရန်​ >> ငှါးရမ်းခ ၁ လ သိန်း ၄၀- ၅၀ ၀န်းကျင်​ခန့်​သုံးပါမည်​ အငှားချထားပေးလိုသည့်ပိုင်ရှင်များ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ငှားရမ်းခနှင့် အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလဲ page messenger (သို့) ဖုန်း/viber မှတစ်ဆင့် ပေးပို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ်များအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ city friend ကုမ္ပဏီမှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ ** အကျိုးတူမိတ်​​ဆွေများလည်း ဆက်​သွယ်​နိုင်​ပါသည်​ ** ဖုန်း - 09 767047020, 09 799554822 (phone/viber/wechat)
Yangon City friend real estate service co.,ltd
မင်္ဂလာ​တောင်​ညွှန့်​ ဗိုလ်​​အောင်​မြတ်​လမ်းနဲ့ ကန်​ရိပ်​သာလမ်းထောင့်​ရှိ Kan Thar Yar Center အနီး လုံးချင်းတိုက်​ငှါးလိုပါသည်​။ အဓိကလိုအပ်​ချက်​မှာ - >> လူ ၁၀ ဦးခန့်​​နေရန် ဖြစ်​သဖြင့်​ အနည်းဆုံး အိပ်​ခန်း (၁၀) ခန်းခန့်​ ပါရှိရပါမည်​။ >> ကားပါကင်​ ၂ - ၃ စီးခန့်​ရှိရန်​ >> ငှါးရမ်းခ ၁ လ သိန်း ၄၀- ၅၀ ၀န်းကျင်​ခန့်​သုံးပါမည်​ အငှားချထားပေးလိုသည့်ပိုင်ရှင်များ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ငှားရမ်းခနှင့် အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလဲ page messenger (သို့) ဖုန်း/viber မှတစ်ဆင့် ပေးပို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ မိတ်ဟောင်း၊ မိတ်သစ်များအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့ city friend ကုမ္ပဏီမှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါသည်။ ** အကျိုးတူမိတ်​​ဆွေများလည်း ဆက်​သွယ်​နိုင်​ပါသည်​ ** Website - cityfri.com ဖုန်း - 09 767047020, 09 799554822 (phone/viber/wechat)
Posted by Daw Khin Ma Dwe
မန္တလေးမြို့ ဇဇ ကွင်း(ထွန်တုံးရပ်ကွက်တွင်း) ဝယ်မည်**** လမ်းတင် ၂ကွက်တွဲ အဝင်အထွက် လမ်းသာ ပတ်ဝန်းကျင် သန့် ရမည် မြေကွက်လွတ် ၀၉၂၀၆၂၉၀၀
Daw Khin Ma Dwe